ကျွန်တော်ဘယ်ကိုမှ မသွားပါဘူး ဟု ဂျူဗင်တပ်နည်းပြသစ်အဖြစ် ရေပန်းစားနေသော ဂွါဒီယိုလာဆို – Myan Ball
Posted on May 17, 2019 by thuya
ပက်ဂွါဒီယိုလာက သူအနေနဲ့ မန်စီးတီးအသင်းမှ ထွက်ခွာပြီး ဂျူဗင်တပ်နည်းပြဖြစ်လာမည်ကို စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြောဆိုမှုပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ်ရှိ နည်းပြကြီးသည် သောကြာနေ့က လက်ရှိဂျူဗင်တပ်နည်းပြ အယ်လီဂရီသည် ရာသီအကုန်တွင် အသင်းမှ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပြီးကတည်းက ဂျူဗင်တပ်နည်းပြဖြစ်လာမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေပြီး ရေပန်းစားနေသူဖြစ်ပါတယ်။ ဂွါဒီယိုလာသည် မန်စီးတီးအသင်းနှင့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှ စာချုပ်သက်တမ်း တိုးခဲ့ပြီး ကုန်ဆုံးရန် ၂ နှစ်ကျန်ရှိနေသေးပြီး သူ့အနေနဲ့ ယခုအချိန်မှာ အီတီဟက်ကွင်းမှ ထွက်ခွာရန်အကြောင်းပြချက်မရှိကြောင်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။
၄င်းက အက်ဖ်အေဖလားဗိုလ်လုပွဲတွင် ၀က်ဖို့ဒ်နှင့်ပွဲမတိုင်မီ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ “ကျွန်တော် ဘယ်နှစ်ခါပြောနေရမှာလဲ? ကျွန်တော် ဂျူဗင်တပ်ကို သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် အီတလီကို မသွားပါဘူး။ ကျွန်တော် ဒီမှာ ကျေနပ်နေပါတယ်။ ဘယ်ကိုမှ မသွားပါဘူး။ နောက်ရာသီမှာ မန်စီးတီးအသင်းနည်းပြအဖြစ် ရှိနေမှာပါ။ ဒါကိုလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ” ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မန်စီးတီးအသင်းသည် ကာရာဘောင်ဖလား နှင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားတို့အား ရရှိပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့် စနေနေ့တွင်ကစားမည့် အက်ဖ်အေဖလားဗိုလ်လုပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့ပါက သမိုင်းတွင် အင်္ဂလန်ရဲ့ အဓိကအကျဆုံးသော ဖလား ၃ လုံးကို ဆွတ်ခူးရရှိနိုင်မည့် ပထမဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်သွားမည်ဟု သိရှိရပါတယ်။
ကြှနျတျောဘယျကိုမှ မသှားပါဘူး ဟု ဂြူဗငျတပျနညျးပွသဈအဖွဈ ရပေနျးစားနသေော ဂှါဒီယိုလာဆို
ပကျဂှါဒီယိုလာက သူအနနေဲ့ မနျစီးတီးအသငျးမှ ထှကျခှာပွီး ဂြူဗငျတပျနညျးပွဖွဈလာမညျကို စိတျဝငျစားခွငျးမရှိကွောငျး အကွိမျကွိမျ ပွောဆိုမှုပွုလုပျသှားခဲ့ပါတယျ။ အသကျ ၄၈ နှဈအရှယျရှိ နညျးပွကွီးသညျ သောကွာနကေ့ လကျရှိဂြူဗငျတပျနညျးပွ အယျလီဂရီသညျ ရာသီအကုနျတှငျ အသငျးမှ ထှကျခှာမညျဖွဈကွောငျး အတညျပွုပွောကွားလိုကျပွီးကတညျးက ဂြူဗငျတပျနညျးပွဖွဈလာမညျဟု သတငျးမြား ထှကျပျေါနပွေီး ရပေနျးစားနသေူဖွဈပါတယျ။ ဂှါဒီယိုလာသညျ မနျစီးတီးအသငျးနှငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈကမှ စာခြုပျသကျတမျး တိုးခဲ့ပွီး ကုနျဆုံးရနျ ၂ နှဈကနျြရှိနသေေးပွီး သူ့အနနေဲ့ ယခုအခြိနျမှာ အီတီဟကျကှငျးမှ ထှကျခှာရနျအကွောငျးပွခကျြမရှိကွောငျး ဆိုခဲ့ပါတယျ။
၎င်းငျးက အကျဖျအဖေလားဗိုလျလုပှဲတှငျ ဝကျဖို့ဒျနှငျ့ပှဲမတိုငျမီ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲ၌ “ကြှနျတျော ဘယျနှဈခါပွောနရေမှာလဲ? ကြှနျတျော ဂြူဗငျတပျကို သှားမှာမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျော အီတလီကို မသှားပါဘူး။ ကြှနျတျော ဒီမှာ ကနြေပျနပေါတယျ။ ဘယျကိုမှ မသှားပါဘူး။ နောကျရာသီမှာ မနျစီးတီးအသငျးနညျးပွအဖွဈ ရှိနမှောပါ။ ဒါကိုလညျး အကွိမျကွိမျပွောခဲ့ပွီးပါပွီ” ဟု ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
မနျစီးတီးအသငျးသညျ ကာရာဘောငျဖလား နှငျ့ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားတို့အား ရရှိပွီးပွီဖွဈသောကွောငျ့ စနနေတှေ့ငျကစားမညျ့ အကျဖျအဖေလားဗိုလျလုပှဲတှငျ အနိုငျရခဲ့ပါက သမိုငျးတှငျ အင်ျဂလနျရဲ့ အဓိကအကဆြုံးသော ဖလား ၃ လုံးကို ဆှတျခူးရရှိနိုငျမညျ့ ပထမဆုံးအသငျးတဈသငျးဖွဈသှားမညျဟု သိရှိရပါတယျ။
ဂျူဗင်တပ်နည်းပြရာထူးအတွက် ကွန်တီထက် ဂွါဒီယိုလာကို ဦးစားပေးခေါ်ယူရန် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူဟောင်း